Inkscape 1.2 inosvika ine multipage rutsigiro, pakati pezvimwe zvakawanda zvitsva zvinhu | Linux Addicts
Inkscape 1.2 inosvika ine multipage rutsigiro, pakati pezvimwe zvakawanda zvitsva zvinhu
pablinux | 17/05/2022 15:53 | Free Software
Mushure me v1.1 uye a chechipiri chekugadzirisa chekugadzirisa zvakafanana, isu tatova nekuvandudzwa kukuru kweiyi nzira yemahara yeIllustrator. Nhamba yekutanga haina kuchinjwa, asi yechipiri ine, uye kubva nhasi inogona kutorwa uye kushandiswa Inkscape 1.2. Yasvika izere nezvinhu zvitsva, izvo zvatisingatadze kutaura kuti yakavandudza mashandiro mune ese mavhezheni mune zvese uye mune macOS kunyanya. Uye ndezvekuti nguva pfupi yadarika iyo apuro inoshanda sisitimu iri kugamuchira rudo rwakawanda kupfuura zvakajairwa, asi iyo M1 uye gare gare inoida.
La kusunungura chinyorwa refu, saka zvakakosha kune avo vanoda kuziva zvese zvitsva zvayakaunza kuti vaverenge chinyorwa chekutanga muChirungu. Somuenzaniso, zvino tsigira mapurojekiti akawanda, kusavapo kwandakanga ndisingarishandisi mune mamwe mabasa angadai akabatsira munguva yakapfuura. Izvo zvakaratidzwa neboka rekusimudzira ndizvo zvauinazvo zvinotevera.
Inkscape 1.2 Pfungwa
Zvinyorwa zveInkscape zvino zvinogona kuve nemapeji akawanda, ayo anotungamirwa neiyo nyowani Peji chishandiso.
Zvinogadzirika mamaki uye zvinyorwa.
Matanho uye nhaurirano yezvinhu zvakabatanidzwa.
Kugadziridzwazve kwe canvas alignment uye snap marongero.
Nyowani "Tiling" Rarama Path maitiro.
Yakagadziridzwazve kunze dialog ine preview uye kugona kusarudza zvinhu/ layers/mapeji uye kunyange akawanda faira mafomati ekutumira kunze.
Ngenisa mifananidzo yeSVG kubva Open Clipart, Wikimedia Commons uye mamwe masosi epamhepo.
Chinhu chinosarudzwa chinobva kuyera uye kufamba nenhamba.
Ese sarudzo dzekugadzirisa mune imwe dialog.
Gradient editing muZadza uye Stroke dialog.
Yakagadziridzwa SVG font mupepeti.
Mavara anoyerera achitenderedza zvimiro uye kuzadza mavara.
Kushanda boolean kushanda kuparadzanisa nzira.
Configurable toolbar, inoenderera icon scaling, uye akawanda akawanda matsva ekugadzirisa sarudzo.
Kuvandudzwa kwekuita kune akawanda zvikamu zveiyo interface uye kune akawanda akasiyana maficha.
Yakawanda yekuvandudza UI.
Yakawanda bug uye tsaona inogadzirisa mune huru Inkscape chirongwa uye stock ekuwedzera
Inkscape 1.2 ikozvino inogona kutorwa kune ese masisitimu akatsigirwa kubva kune yako website yepamutemo. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vane AppImage iripo, asi ichakurumidza kusvika paFlathub, Snapcraft uye, pave paya, pane zvinyorwa zvekugovera kwakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Inkscape 1.2 inosvika ine multipage rutsigiro, pakati pezvimwe zvakawanda zvitsva zvinhu
Rocky Linux 8.6 iri pano, inosvika yakavakirwa paRHEL 8.6
Vagrus The Riven Realms: Vorax iyo DLC itsva